ဒီအခကျြ ၇ ခကျြ သငျ့မှာရှိနရေငျ သငျလကျထပျဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပီ - ONE DAILY MEDIA
လကျထပျတယျ ဆိုတာဟာ လူတယောကျရဲ့ အခဈြခရီး လမျးဆုံးပါ ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဘယျသူမဆို ကိုယျခဈြတဲ့ ခဈြသူနဲ့ တှဆေုံ့တဲ့ အခါမှာ လကျထပျဖို့ကို စဉျးစားကွ ပါတယျ ။ သငျကော သငျ့ရဲ့ခဈြသူလေးနဲ့ လကျထပျဖို့ အဆငျသငျ့ ဖွဈနပွေီလား ?
သငျ့ခဈြသူနဲ့ လပျထပျခငျြတဲ့ အကွောငျးအရငျးတှေ သငျ့မှာ လုံလောကျစှာ ရှိနပေါပွီ ။ သငျ့ကို သူနဲ့ဘာလို့ လကျထပျခငျြသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျး အခွားသူ တယောကျက မေးလာရငျလညျး သငျ့အနနေဲ့ တညျငွိမျစှာ ဖွနေိုငျနမှောပဲ ဖွဈပါတယျ ။
၂။ ခဈြသူ ရညျးစားသကျတမျး
သငျတို့ နှဈယောကျရဲ့ ခဈြသူ ရညျးစားသကျတမျးဟာလညျး အတျောအသငျ့ ရှိလာပွီ ဖွဈပွီး နှဈဦးသား မခှဲနိုငျမခှာရကျ ဖွဈအောငျ ခဈြခငျ မွတျနိုး နကွေပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
သငျစီစဉျနတေဲ့ အရာဟာ သာယာခမျြးမွတေဲ့ အိမျထောငျရေး တဈခုပါ ။ ကွီးကယျြ ခမျးနားတဲ့ လကျထပျပှဲတဈခု မဟုတျပါဘူး ။ သငျဟာ သူနဲ့ တဈဘဝလုံး အေးခမျြးစှာ နထေိုငျသှားဖို့ကိုပဲ ကွိုစားစီစဉျ နတောဖွဈပွီး ၊ ငှကေုနျကွေးကြ မြားပွီး လူအထငျကွီးမယျ့ လကျထပျပှဲ အခမျးအနား မဟုတျပါဘူး ။
၄။ Single ဘဝမှာ သငျ ပြျောရှငျခဲ့ပွီးပါပီ
သငျ့ရဲ့ အသကျဟာ (25) နှဈနဲ့ အထကျ ရှိနပွေီ ဖွဈပွီး Single ဘဝမှာ ပြျောရှငျစှာ နထေိုငျခဲ့ပွီးပွီ ဖွဈပါတယျ ။
သငျတို့နှဈယောကျဟာ အခကျအခဲတှေ ပွဿနာတှေ အားလုံးကိုလညျး အတူတူ ရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးခဲ့ ကွဖူးပါတယျ ။ နောကျထပျ လာမယျ့ အတားအဆီးတှကေို အတူတကှ ရငျဆိုငျဖို့အတှကျလညျး နှဈယောကျ စလုံးမှာ စိတျဓာတျ ခှနျအားတှေ အပွညျ့အဝ ရှိနကွေပါတယျ ။
သငျဟာ သငျရဲ့ ခဈြသူအပျေါ အလှနျ ယုံကွညျပွီး ၊ သူရဲ့ လုပျရပျတှဟောလညျး ယုံကွညျစရာ ကောငျးလောကျအောငျကို သငျ့ကို အလှနျဂရုစိုကျ ကွငျနာပွီး သငျကို တငျ့တောငျ့တငျ့တယျ ထားနိုငျဖို့ အတှကျလညျး သူ အစှမျးကုနျ ကွိုးစားနေ မှာပါ ။
သငျ့ရဲ့ ခဈြသူကို သငျ တဈယောကျထဲတငျ မကဘဲ သငျ့ရဲ့ မိသားစု ၊ ဆှမြေိုးနဲ့ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှကေပါ လိုလို လားလား လကျခံကွပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ သငျတို့ စုံတှဲကို လိုကျဖကျညီကွောငျး ခြီးကြူး ပွောဆိုကွပါ လိမျ့မယျ ။
ဒီအချက် ၇ ချက် သင့်မှာရှိနေရင် သင်လက်ထပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပီ
လက်ထပ်တယ် ဆိုတာဟာ လူတယောက်ရဲ့ အချစ်ခရီး လမ်းဆုံးပါ ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အခါမှာ လက်ထပ်ဖို့ကို စဉ်းစားကြ ပါတယ် ။ သင်ကော သင့်ရဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီလား ?
သင့်ချစ်သူနဲ့ လပ်ထပ်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ သင့်မှာ လုံလောက်စွာ ရှိနေပါပြီ ။ သင့်ကို သူနဲ့ဘာလို့ လက်ထပ်ချင်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း အခြားသူ တယောက်က မေးလာရင်လည်း သင့်အနေနဲ့ တည်ငြိမ်စွာ ဖြေနိုင်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
၂။ ချစ်သူ ရည်းစားသက်တမ်း
သင်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူ ရည်းစားသက်တမ်းဟာလည်း အတော်အသင့် ရှိလာပြီ ဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးသား မခွဲနိုင်မခွာရက် ဖြစ်အောင် ချစ်ခင် မြတ်နိုး နေကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်စီစဉ်နေတဲ့ အရာဟာ သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခုပါ ။ ကြီးကျယ် ခမ်းနားတဲ့ လက်ထပ်ပွဲတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး ။ သင်ဟာ သူနဲ့ တစ်ဘဝလုံး အေးချမ်းစွာ နေထိုင်သွားဖို့ကိုပဲ ကြိုစားစီစဉ် နေတာဖြစ်ပြီး ၊ ငွေကုန်ကြေးကျ များပြီး လူအထင်ကြီးမယ့် လက်ထပ်ပွဲ အခမ်းအနား မဟုတ်ပါဘူး ။
၄။ Single ဘဝမှာ သင် ပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီးပါပီ
သင့်ရဲ့ အသက်ဟာ (25) နှစ်နဲ့ အထက် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး Single ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ အခက်အခဲတွေ ပြဿနာတွေ အားလုံးကိုလည်း အတူတူ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းခဲ့ ကြဖူးပါတယ် ။ နောက်ထပ် လာမယ့် အတားအဆီးတွေကို အတူတကွ ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လည်း နှစ်ယောက် စလုံးမှာ စိတ်ဓာတ် ခွန်အားတွေ အပြည့်အဝ ရှိနေကြပါတယ် ။
သင်ဟာ သင်ရဲ့ ချစ်သူအပေါ် အလွန် ယုံကြည်ပြီး ၊ သူရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာလည်း ယုံကြည်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို သင့်ကို အလွန်ဂရုစိုက် ကြင်နာပြီး သင်ကို တင့်တောင့်တင့်တယ် ထားနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း သူ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေ မှာပါ ။
သင့်ရဲ့ ချစ်သူကို သင် တစ်ယောက်ထဲတင် မကဘဲ သင့်ရဲ့ မိသားစု ၊ ဆွေမျိုးနဲ့  မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကပါ လိုလို လားလား လက်ခံကြပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သင်တို့ စုံတွဲကို လိုက်ဖက်ညီကြောင်း ချီးကျူး ပြောဆိုကြပါ လိမ့်မယ် ။